Hazard oo si cad u sheegay garoonka uu ugu jecelyahay inuu ku ciyaaro iyo goolkii ugu quruxda badnaa uu ku soo dhaliyay – Gool FM
Hazard oo si cad u sheegay garoonka uu ugu jecelyahay inuu ku ciyaaro iyo goolkii ugu quruxda badnaa uu ku soo dhaliyay
Dajiye January 14, 2019
(Chelsea) 14 Jan 2019. Xidiga kooxd Chelsea Eden Hazard ayaa qiray inuu si weyn u jecel yahay garoonka taariikhiga ah ay ku ciyaarto kooxda Liverpool ee Anfield.
Eden Hazard ayaa amaan xoogan kala dul dhacay garoonka Anfield, isagoo sheegay inuu jecelyahay ku ciyaarista garoonka taariikhiga ah ee kooxda Liverpool, sababa laxiriira jawiga iyo qaabka ay u sameysan yihiin jamaahiirta halkaas ku sugan, gaar ahaan marka ay ku ciyaarayaan kulamada waaweyn.
Laacibka reer Belgian oo ka hadlayay jawiga garoonka Anfield ayaa wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay:
“Waan jeclahay garoonka Anfield, jawiga iyo wax walba ee halkaas ah aad ayay u fiican yihiin”.
“Waxaan jeclahay inaan ku dhex ciyaaro jawiga halkaas, waxaan heysaa goolal badan ee aan kaga soo dhaliyay garoonka Anfield koox weyn sida Liverpool oo kale”.
“Mid ka mid ah goolashii ugu quruxda badnaa ee aan ku soo dhaliyay garoonka Anfield ayaa ahaa, kulan aan ku soo galay qaab badal ah, waxaana gool qurux badan kaga dhaliyay Mignolet kulankii Carapa Cup-ka bishii September ee lasoo dhaafay”.
“Waxaan dareenay niyad jab kadib guuldaradii Manchester City” - Alexander-Arnold
Solari oo kadib guushii ay ka gaareen kooxda Real Betis ka hadlay xidigaha Isco iyo Marcelo